नेपालमा ‘केटीएम २५० एड्भेन्चर’ मोटरसाइकल लन्च, मूल्य कति पर्ला ? Bizshala -
नेपालमा ‘केटीएम २५० एड्भेन्चर’ मोटरसाइकल लन्च, मूल्य कति पर्ला ?
काठमाण्डौ । विश्वको नं. १ र नेपालको सबैभन्दा छिटो बढिरहेको प्रिमियम मोटरसाइकल ब्रान्ड केटीएमले बहुप्रतिक्षित केटीएम २५० एड्भेन्चर लन्च गरेको छ।
नेपालमा व्यापक रुपमा बढिरहेको एड्भेन्चर मोटरसाइकलको सेग्मेन्टलाई विस्तार गर्नका लागि यो मोटरसाइकल लन्च गरिएको हो। यसअघिको केटीएम ३९० एड्भेन्चरले उत्साहीहरुको कल्पनात्मकता र अपेक्षालाई पूरा गरेको थियो। एड्भेन्चर बाइकिङको संसारमा ग्राहकलाई पहिलो कदम चाल्न लगाएर केटीएम २५० एड्भेन्चरले यो फ्रेन्चाइजलाई अझ बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।